श्रावण १५ – खिर खाने दिन – Ramjham Nepal
Home>>समाचार>>श्रावण १५ – खिर खाने दिन
Raju Aryal१५ श्रावण २०७७, बिहीबार २१:१८ 269 Views0
मानव सभ्यतासंगै मानव र दूधको एउटा नमेटिने सम्बन्ध छ र यसबाट बन्ने कैंयन मिठा परिकारहरू विशेषतः शुद्धता, स्वास्थ्य र विशिष्ट स्वादकालागि विश्व समूदायमैं प्रिय बन्न सफल छ । यस्तै परिकारहरूमध्ये अन्न र दूधको अनुपम समिश्रण यस परिकारमा भोजन, पोषण नै यसको आकर्षण हो । सेतो दूध र सेतो चामल मिसाइएको यो भोजनको सम्बन्ध देवताहरुले प्राचिनकालमा गरेको समुन्द्रमन्थनसंग सम्बन्धित छ, त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म दूधलाई शुद्धिकरण गर्ने तत्व र पोषण मिसिएको बहूगुणी अमृतकै रुपमा लिइन्छ । आर्यूवेदमा समेत खिरलाई प्राचिन भोजनको रूपमा ब्याख्या गरिएको छ । खिर शब्दपनि संस्कृत शब्द ‘क्षिरमा’बाट आएको मानिन्छ । क्षिरमा अर्थात् दूध र अन्नबाट बनेको परिकार भन्ने अर्थ लाग्दछ । रोमन सभ्यतामा पनि खिरलाई खानाको एउटा अपरिहार्य तत्वकारुपमा सेवन गरिने चलन छ । यसलाई ‘पायस’ तथा कतैकतै यसलाई ‘तस्मै’ पनि भनिन्छ । वैदिक सनातन संस्कारमा पितृहरुलाई चढाउन पायस अर्थात् दूध र अन्नको मिश्रणका रुपमा खिर पकाउने चलन छ ।
अनि दूध ल्याउनुभयो त खिर बनाउन ? आज त दुधको ब्यापक बिक्रि हुन्छ नेपालमा । बिहानैदेखि दुध पसलहरुमा भिडभाड हुनेगर्दछ, आफ्नोलागि खिरको जोहो गर्न नभुलौ है । ल है शहरतिर हो भने त डेरीमा अरूदिन ३-४ बजे सक्किने दूध बिहान ९ नबज्दै सक्किएला… ढिलो हुँदा नपाइएला नि !
-हाम्रो पात्रोबाट साभार